Sei Smartphone Iri Kushandiswa? | Martech Zone
Sei Smartphone Iri Kushandiswa?
Chipiri, Gunyana 20, 2011 Svondo, October 4, 2015 Adam Mudiki
Ivo vanhu veTatango vakaburitsa imwe infographic yakakura - ino nguva ichipa kuputsika kwekuti vashandisi vari kushandisa sei ma Smartphones avo. Kana iwe ukatenda hype, iwe ungatenda kuti maapp, kunyanya Facebook, ndimambo… asi unenge usiri iwo. Nyore ol 'mameseji ekutumira mameseji achiri kutora iyo yepamusoro nzvimbo yekuti mashandisiro ari kuita vanhu mafoni avo Mazuva ano. Zvinonzwisisika kusipo kubva kune infographic ndeye QR Code kudzikinurwa.
WordPress rel = "prev" uye rel = "inotevera"
Sep 20, 2011 na4: 33 PM
Zvinonakidza kuona macheki kunyange achitora 12%. Inoratidzika kunge yakakwirira kwandiri. Ndiri kufungidzira izvi zvakaitwa neakanaka tech savvy vateereri uye kwete neyakajairika vanhu vekunze
Sep 20, 2011 na4: 55 PM
Niall, kucherechedza kukuru. Ini ndinofungidzira kuti chero ongororo yekudyidzana inokanganiswa nenyaya yekuti iro boka riri kupindura tech tech uye rakabatana.